Hevitra mialoha momba ny "Point de suture" nataon'i Grobli Zirignon avy amin'i Tanella Boni - Afrikhepri Fondation
Sabotsy 16 Oktobra 2021
Fifandraisana PSYCHART Therapy
Fampidirana ny “Point de suture” an'i Grobli Zirignon nataon'i Tanella Boni
Vakiteny: 4 min
DTaorian'ny famoriany voalohany, Epaves (1981), dia nametraka ny feo i Grobli Zirignon. Nilaza izy fa poeta sesitany, tsy nisy farany nirenireny.
Nihira momba ny fisian'io lehilahy tsy manana zom-pirenena io izy nitady ny firaisankinany very. Ny fanaparitahana (1982) dia nanamafy ny lohahevitry ny fandravana ny fisian'ny olona "natsipy toy ny kijana" teo amin'izao tontolo izao, tamin'ny fikolokoloana ny fahafatesan'ny olona rehetra tany an'efitra tsy takatry ny saina. Ny zava-drehetra dia mitranga toy ny hoe ny poeta, miaraka amin'ity zotra ity, dia nitazona, toy ny protôzônia, nanodidina ny ivon-toerana afovoany, napetraka teo anelanelan'ny fahafatesana, fisiana ary tena Fiainana, ity fitarihana ity izay tsy mifarana. manelingelina anay amin'ny dia tsy azo avadika mankany amin'ny tsy misy.
Eto sy ankehitriny, ny poeta dia mametraka stitch maro ary vaovao nohavaozina amin'ny hoditry ny fisiana naratra ho faty. Fa ny teny mahery kosa dia balsama ihany no manatsara ny volon'ny vatana raha mbola mandeha hatrany ny fo. Ny fitrandrahana dia lasa fitsaboana lava iray.
Ao amin'ny boaty fanafodiny, ny poeta efa misy dia nametraka ho an'ny fahasambarany sy ho antsika, latsaka fotsiny ny zavatra niainany manokana tao anaty pejy roa na telo; avy eo fehezam-boninkazo miavaka vita amin'ny ek-sistence, avy amin'ny Fiteny, avy amin'ny fahalalana, avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny hafa.
Ao amin'ny farany ambanin'ny fivarotam-panafody, rakotra filozofia dia rakotra vovoka amin'ny psychoanalysis.
Ny zava-drehetra dia mijanona ao anatin'ny fihetsiky ny angano Dogon tsara tarehy. Eto, avy eo, ny reniranon'i Heraclitus dia mifanila amin'ny famoizam-po an'i Kierkegardiana na eo i Heidegger. Ny fisiana dia tantara an-tsehatra izay tsy lalaovina amin'ny tsy misy sy ny tsy misy, fa eo amin'ny tsy misy sy ny hadalana. Ary ny poeta dia eo amin'ny toerana iray, eo anelanelan'i Sade sy Kant. Na izany aza, ny endrika amboadia mirenireny, Ogo, dia toa manjakazaka amin'izany rehetra izany. Point de suture tsy misy afa-tsy fihirana ho an'ny fikatsahana fidirana ho an'ny roa tsy azo soratana. Manodidina ireo sombina no misy ny banga, ny pejy banga, ny rindrin'ny fahafatesana izay ifandohan'izay misy foana ary noho izany dia tsy maintsy esorina ilay masontsivana:
"Tsy maintsy mamono olona isika
tsy maintsy mamono fahafatesana isika
tsy maintsy vonoina ny fahafatesana ”.
Fa ahoana no fomba famonoana olona maty raha viaticum ny ady, raha i Polemos, araka ny nolazain'ny prezidansa, no Rain'ny zava-drehetra? Ny ek-sistant, ity sesitany mandrakizay dia tsy manan-tsafidy. Niampita teo anelanelan'ny fandrarana roa: ny valan'ny Fahafatesana izay tsy maty sy ady maharitra. Na mianjera ao amin'ny "lavaka iorenan'ny maty" izy na koa sahy manao izany amin'ny akanjo feno sazy mihatra aman'aina. Na izany na tsy izany, mandeha tsy misy tanjona izy, toy ny mpiambina tsy mivadika amin'ny toerany na vorona voafatotra. Tsy faly, tsy manana fahafinaretana, sorena.
Raha sendra mipoitra avy amin'io vertigo ilaina io izy dia ho sitrana, tompon'andraikitra amin'ny maha je. Izy io dia hanao miboiboika sy faribolana eo ambonin'ny ranomasina, ity fototra hafa ity, izay ny tarehiny dia ilay reny no mandany, misondrotra, manintona.
An-tokotany. Ny tabataban'ny Fiteny, ireo fambara fahoriana ireo izay tsy misy maka, dia ilay vatan-kazo tsy azo ihodivirana amin'ny sesitany rehetra. Raha toa ka miteny mafy ny ek-sistant raha ilaina, tsy misy fiahiahiana ny fanatrehany sy ny fijerin'ny iray hafa, raha toa ka manao toy ny kolo mitokana izy, ny fihetsiky ny vatany. avelao izy hanana fahafinaretana, mandeha toy ny mpandeha tady amin'ny tady, mbola tsara kokoa, tetezana caiman-rickety, mihantona eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany ambonin'ny ranomasina.
Lafiny zaridaina. Tokony alainao an-tsaina ny poeta efa misy toy ny Robinson Crusoe raha tsy misy ny zoma. Straced Nowhere, hanorotoro ny vato ao amin'ny nosy efitra. Hanao vatana sy fanahy izy, amin'ny maha olona afaka azy, handresy "polder" iray mandrahona tsy misy farany. Hamboly ao izy fa tsy ny tulip fa "ny raozy / raozin'ny fasika", izay ho fantany tsy ho ela.
Ka hanana fotoana fialan-tsasatra izy hahita, noho ny toetr'andro tsara, "flashes" an'ny Lanitra ety an-tany. Votoatin'ny Paradisa vitsivitsy no hisokatra eo am-pototry azy. Toerana tsy misy ilana azy sy chimerika, fanilo avy any an-kafa. Hataony batemy amin'izy ireo ny Fahamarinana, Finoana, Andriamanitra… ireo fiheverana ireo fa ho tiany hatramin'ny fahafatesana. Tantaram-pitiavana mahafinaritra, miaraka amin'ny bonus fanampiny amin'ny daty tsy tratra. Andriamanitra, raha ny marina, "ny lafika roa lavorary" ary ankoatr'izay ny hevitra manintona indrindra, dia hijanona tsy eo. Mandrakizay. Ny tete-a-tete nofinofy, miaraka amin'ny Ray, dia tsy hitranga.
Ary ho ilay fiheverana be voninahitra ataon'ilay mpanakanto I araka ny filaharany an'ohatra. Ho very daholo ny zava-drehetra afa-tsy ny feon'ny fieritreretan'ny lozika amin'ny fitaka manerantany.
Dia ho lasa mpaminany ny poeta:
"Izaho dia mpitondra hafatry ny Lahatra
ary izao tontolo izao no entiko
dispenser an'ny fiainana be voninahitra ".
Ary mahatsapa tsara momba ny tenany izy, ilay iray, teo amin'ny hazofijaliany, manam-potoana hanomezana masony ho an'ny mpiara-miasa aminy amin'ny fotoana rehetra: Socrates the just, the Jesus Jesus, Mandela the deported to ny fiainana.
Izy no hibodo ny seza fiandrianan'Andriamanitra poakaty, hanana "fiandraiketana ny fanahy, mipetraka eo anilan'ny farafaran'ity, ity" zavatra manafintohina "napetraka tao, tsy misy Mpanoratra, eo afovoan'ny" Crossroads ". Ity iraka Promethean ity dia ny toerana fampihavanana ny tena amin'ny tena.
Izao tontolo izao dia asan'ny mpanakanto efa misy na ho tsinontsinona. Saingy "misy iray" araka ny tadiavin'i Lacan. Izany no antony handresen'ny mpitsabo efa misy, na eo aza ny zava-drehetra, ny fakam-panahy hamono tena.
Tsy maninona i Grobli. Izy dia mijanona ho voafintina "amin'ny fanontaniana".
Fandringanana tanteraka sy fitsaboana fitsaboana
Fitsaboana momba ny fitsaboana sy ny taratry ny fanantenana
Mametraha lahatsoratra bebe kokoa
Zahao ny marina momba an'i Banks Brian (2019)
Raha tianao io dia zarao azafady ity pejy ity. Azonao atao koa ny mandefa ny lahatsoratrao amin'ity tranonkala ity.
Ity fikandrana ity dia hikatona ho azy ao anatin'ny segondra 10